Waxaa garoonka Diyaaradaha Calamiga ee magaalada Muqdisho maanta ka soo degatay Diyaaraddii u horeysey oo..
Date: 2011-07-27 06:19:11
Waxaa garoonka Diyaaradaha Calamiga ee magaalada Muqdisho maanta ka soo degatay Diyaaraddii u horeysey oo sida Raashiin iyo Mucawino kala duwan oo loogu tala galay Dadka soo bara kacay.
Diyaaraddan oo u raran Qaramada Midoobay Hay’adeeda WFP ayaa waxa ay ahayd Diyaarad aad u weyn oo daawashadeeda Boqolaal dad ahi maanta isugu soo baxen markii ay soo caga dhiganaysey Garoonka Diyaaradaha Caalamiga ee magaalada Muqdisho.
Mid ka mid ah Hawl wadeenada Garoonka Diyaaradaha oo diiday in magaciisa la xigto ayaa sheegey in Diyaaraddaasi ay waddo Deeq Ka Kooban Raashiin sida Bariis, Bur, Caana Boore qasacadaysan. Bustayaal Teendhooyin iyo agabka Guryaha loo adeegsado kuwaasoo dhamaantooda loogu btala galay Dadka soo bara kacay.
Diyaaraddan oo ahayd mid aad u weyn ayaa Dadka badankooda ay u soo ban baxeen in ay dawadaan iyadoo diyaaradahan oo kalena aysan Muqdisho in dhawaala soo caga dhigan.
Hay’adda WFP ayaa mudo hore ugu danabaysey Deeq sidan oo kale ah gaar ahaan wixii ka danbeeyay markii Xarakada Shabaab ay k mamnuueen degaanada ay ka taliyqan iyadoo deqdan maanta Mudisho soo gaadhayna ay tahay tii ugu horeysey ee soo gaadha tan iyo wixii ka danbeeyay shirkii Rooma oo lgu balan qaaday in si deg deg ah ay u bilaaban doonto Deeqda WFP.
Deeqdan Maanta Muqdisho la keenay ayaa waxa ay ku soo aadaysaa Xilli Magaalada muqdisho ay ka jirto Xaalad daran iyadoo maanta oo u danbeyseyna ay soo gaareen magaalada Muqdisho illaa laba boqol oo qoys oo bara kacayaal hor leh kuwaasoo lagu arkayay Saakay Km. 4ee magaalada Muqisho.
Si kastaba deeqdan aya n la garanayn sida ay u gaari doonto dadka soo bara kacay xilli Horjoogayasha Xeryaha daka soo bara kacay ay sheegyaan inuu jiro Musuq maasuq ay wadaan gudiyada qaabilsan deeqaha.